Kuwani waa codsiyada lagama maarmaanka u ah Android | Androidsis
Qoraalkan cusub, oo ah iskudubarid shakhsiyeed, ayaan ku tusi doonaa Francisco Ruiz barnaamijyadooda uu ugu jecelyahay, taasi waa, naftayda. Isku soo uruurinta oo aan cinwaan uga dhigi karno sida codsiyada lagama maarmaanka u ah terminal-kayga Android, codsiyada qaar ka mid ah sida ugu dhakhsaha badan ee aan u iftiimiyo Rom cusub si aan u tijaabiyo oo aan qof walba ugu sheego habka rakibaadda, waxa ugu horreeya ee aan sameeyo ayaa ah inaan ka soo dejiyo Google Play Store oo aan isla markiiba rakibo maadaama aan dhib ku noolaan karo la'aantood.
Kadib, marka laga reebo soo bandhigida iyo ku talinta codsiyada muhiimka ah ee markasta aan sito Boggeyga 'Android terminal', waxaan sidoo kale ku soo lifaaqayaa xiriir toos ah oo soo degsasho ah oo ku yaal Play Store, haddii ay dhacdo in dalabka si rasmi ah looga heli karo dukaanka rasmiga ah ee Android, ama ku xirnaanta APK kiiska, in wax kasta oo jira, in waa codsi aan si rasmi ah looga heli karin Google Play Store. Marka waxaa jira codsiyo uu jecel yahay Francisco Ruiz.
1 Francisco Ruiz barnaamijyadooda uu ugu jecelyahay
2 Waa File Explorer
3 Hada Google Hadda Bilaabeysa
4 Wax yar oo ka mid ah codsiyada Google aniga ahaan
5 Muusikada Netease, aad uga fiican Spotify Premium
7 WhatsApp, Telegram, Messenger iyo Skype
8 Facebook iyo Twitter
9 Ciyaaryahan Pro Music
10 VLC loogu talagalay Android
Francisco Ruiz barnaamijyadooda uu ugu jecelyahay
Waa File Explorer
Aniga ahaan, muddo dheer shaki la’aan ugu fiican Root File Explorer in aan kala soo dagsan karno Android kala duwanaansho fara badan dhamaan codsiyada kale ee qaabka ah. Marka, sidee bay noqon kartaa haddii kale, kani waa mid ka mid ah codsiyada lagama maarmaanka u ah terminal-kayga Android iyo kan aan guud ahaan u ordo inaan rakibo marka hore.
In kasta oo aan loo tixgelin meel u dhow mid ka mid ah Launchers-yada ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android, gaar ahaan iyada oo ay ugu wacan tahay qaabayntiisa hoose iyo xulashada qaabeynta, dhammaantiin inaad raaceen fiidiyowyada aan ku soo geliyay kanaalka Codka jamhuuriyadda soomaaliya kugula talinta codsiyada ama sharaxaya tabaha kala duwan ee Android ama xitaa casharro ku saabsan sida wax looga qabto Android, waxaad awoodi doontaa inaad aragto sida tani shaki la'aan tahay Launcherka aan ugu jeclahay Android.
Marka laga reebo naqshaddiisa aan fiicnayn iyo dheecaankeeda, taas oo iga dhigaysa inaan doorto Launcher-kan oo aan ahayn mid kale, waa is dhexgalka weyn ee dhamaan adeegyada Google, iyo waxa ugu weyn ee dhammaan, leh dhexgalka Google Now, cajiib ah oo aan la mid ahayn kaaliyaha codka ee android google taas oo ah mid ka mid ah shaqooyinka aan lagu waayi karin terminalkeyga Android.
Wax yar oo ka mid ah codsiyada Google aniga ahaan
Sida for Codsiyada muhiimka ah ee Google ee ku jira terminaalkeyga Android, Had iyo jeer waxaan wataa waxyaabaha soo socda:
Maamulaha Aaladda Android
Sidee ayey u ahaan laheyd xoogaa dheer oo caajis ah in lagu xiro xiriirin toos ah oo lagu soo dejisto mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadan Google, waxaan arkay wax ku habboon ku soo lifaaq xiriir toos ah bogga Google Play halka ay ku yaalliin dhammaan barnaamijyada google.
Muusikada Netease, aad uga fiican Spotify Premium
Fiidiyowga lifaaqa ah waxaad ka arki kartaa sababta Muusikada Ogaada Waa mid ka mid ah codsiyada lagama maarmaanka u ah Android-kayga iyo sababta oo ah waxaan u tixgeliyaa sababo badan awgood bedel aad ufiican oo Spotify ah.
Shazam waa mid kale oo ka mid ah codsiyadaas muhiimka u ah Android-kayga. Codsi xasaasi ah oo naga caawinaya helitaanka cinwaanka iyo farshaxanka heestaas oo aan aad u jecel nahay, aan meel walba ka maqalno oo aanan garanaynin waa kuma fannaanka heesta.
WhatsApp, Telegram, Messenger iyo Skype
Si fudud codsiyada fariimaha deg degga ah taasi kama maqnaan karto terminalkeyga Android.
Facebook iyo Twitter
Mar kasta oo aan Rom cusub ku dhajiyo, laba codsi oo aan ka maqnaan karin terminalkeyga, xitaa haddii aanan taageere weyn u ahayn Facebook, runta ha loo sheego, kuwani waa kuwa Facebook iyo Twitter, in ka badan wax kasta oo aad awood ugu yeelan karto inaad si joogto ah ugu xirnaato shabakadaha bulshada ee aad si firfircoon uga qaybqaadato Androidsis, si looga jawaabo dhammaan su'aalahaaga, shakigaaga iyo weydiimahaaga maalin walba noogu yimaadda iyada oo loo marayo labadan shabakadood ee bulshada ee aadka loo gaadho.
Ciyaaryahan Pro Music
In kasta oo aanan aad loo siinin codsiyada lacag bixinta, tani shaki la’aan waa codsi aan lagu waayi karin terminalkeyga Android-ka oo maalintiisii ​​aan si farxad leh ku bixiyay 3,50 euros kharashka aniga ahaan waa ii dheer tahay ciyaaryahanka muusikada ugu fiican ee Android iyada oo xulashooyin badan oo qaabeyn ah iyo xitaa xoojin iyo awood cod.
VLC loogu talagalay Android
si fudud ciyaaryahanka fiidiyaha ugu fiican ee Android, lagu habeeyay si ay u awoodaan inay akhriyaan nooc kasta oo fiidiyoow ah iyo sidoo kale tilmaamo ku yaal shaashaddaada Android si ay u sii wadaan, dhaqso u socdaan, kor u qaadaan una yareeyaan iftiinka ama mugga dib u soo celinta adigoo xoqaya.
Si fudud macmiilka ugu fiican ee adeegyada kaydinta daruuraha taasi waxay na siisaa gebi ahaanba bilaash, wax intaa ka badan iyo wax ka yarba ma jiraan 50 Gb oo ah kaydinta daruurta bilaashka ah.
Ugu dambeyntii iyo in la dhammeeyo isku-duwidda shaqsiyadeed ee Francisco Ruiz barnaamijyadooda uu ugu jecelyahay, oo halista ugu jira inaan xaqiiqdii seego mid muhiim ah, mid ka mid ah codsiyada lagama maarmaanka u ah Android-kayga shaki kuma jiro tan akhriste warka oo si habsami leh u dhexgelinaya baraha bulshada iyo suurtogalnimada abuuritaanka joornaallo aad adigu iska leedahay isla markaana adiga waxa adiga kuugu muhiimsan adiga iyo waxa aad xiisaha gaarka ah u leedahay teknolojiyadda, bulshada, siyaasadda, isboortiga, iwm, iwm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Kuwani waa barnaamijyada uu jecel yahay Francisco Ruiz: Codsiyada Muhiimka u ah barnaamijkeyga Android
Francisco Waxaan kugu raacay ku dhowaad 100% adiga, waxaan kuu sheegi doonaa barnaamijyada «noo kala sooc»
1-Kiiboodhka Google wuu fiicanyahay, wax badan buu hagaajiyay, laakiin waxaan ka door bidaa SwiftKey oo awoodeeda saadaalineed waa mid cajiib ah.
2-VLC on Windows aan ugu jeclahay, on Android waxay leedahay wax badan oo awood laakiin weli waa ka dhiman
Taasi way na kala duwan tahay, laakiin waxaa jira barnaamij kale oo soo jiitay dareenkeyga waana midda aan ku raacsanahay wax yarna ay tahay inay nagu waafaqaan, The Google Launcher. Sababaha la mid ah fudeydkaaga iyo isdhexgalkaaga. Waxaan ku siiyay maroojinta adoo rakibaya Xposed GEL Settings (oo laga heli karo Play Store), waxay kuu ogolaaneysaa inaad habeyso Launcher oo aad ku darto qaar ka mid ah waxqabadyada sida calaamadaha iyo astaanta astaanta khaanadda dalabka. Waxaan kugula talinayaa hadaadan isku deyin.
Jawaab Federico Láng
Talo bixin aad u fiican oo app ah ayaa loo arkaa inaad leedahay dhadhan fiican 😉
Shakhsiyan, aad baan u isticmaalaa WhatsApp, Skype iyo VLC, waa inaan cadeeyaa inaanan laheyn casriga casriga ah maxaa yeelay hadii kale waxaan isticmaali lahaa barnaamijyo badan oo faalooyin wanaagsan ku leh Google Play, laakiin hada waxaan isticmaalaa kuwa ugu aasaasiga ah.
Jawaab Alexander Vasquez
Waxa ugufiican dhamaan Netease, hadaadan isku dayin, waqtiga ha lumin maxaa yeelay waad ka yaabi doontaa wax walba oo lagu qaban karo, oo ay ku jirto inaad si bilaash ah ugu soo dejiso muusikada aad ugu jeceshahay.
Hagaag waan ku raacsanahay faallooyinkii hore, ku dhawaad ​​100% isla sidaas ayaan sameeyaa markii aan rakibayo ROM-ka cusub. Si kastaba ha noqotee waxaan u isticmaalaa Poweramp muusig ahaan (waxaan u maleynayaa inay aad uga fiican tahay tan aad sheegtay, oo leh maqaarka sidoo kale, waxaa lagu qaabeyn karaa musixmatch ee ereyada).
Taas ka sokow waxaan u isticmaalaa Feedly ahaan akhristaha Rss iyo Pushbullet (Si aan ugu diro xiriiriyeyaal, sawirro, fiidiyowyo u dhexeeya moobiilka - pc - kiniiniga. Muhiimka ah). Waxaan isku dayi doonaa Netease. Mahadsanid
Ku jawaab carlito brigante
Salaan Francisco! Waxaan doonayay inaan iskudayo Netease oo Isbaanish ah laakiin feylka .apk ee lagu marti qaaday Mega wuu jabay. Hadaad wax ka qaban karto waan ku mahadinayaa. Mahadsanid.
Xidhiidhku horay ayuu u go'an yahay markanna wuxuu ku xiran yahay apk-ga Isbaanishka.
Jovanny Delgado sawirka meeleynta dijo
Francisco, codsiyadaada waa kuwo heer sare ah laakiin waxaan dhibaato ku qabaa markaan rabo inaan rakibo dhamaantood inkasta oo xaqiiqda ah in kiniinkeygu leeyahay 16 GB oo keyd ah, kaliya waxay ka tageen 1 GB oo ah xasuusta gudaha mana ii ogolaato inaan rakibo barnaamijyo badan, waa ma jirtaa waddo lagu ballaariyo xusuustaan ​​gudaha ah?
Ku jawaab Jovanny Delgado
CtorDayaanna @ dijo
Barnaamijyo aad u wanaagsan iyo shaqo aad u wanaagsan Don Francisco Ruiz, waxaan jeclaan lahaa inaan kuu sheego inaan u adeegsaday VLC si aan u ciyaaro fiidiyowyo, laakiin fiidiyowyada qaar waxay la kulmeen kala duwanaansho u dhexeeya maqal iyo muuqaal, sidaa darteed waxaan u beddelay MX player, isla fiidiyowyada VLC wuxuu igula ciyaaray maqal iyo muuqaal si xun loo iswaafajiyay codsigani si wanaagsan ayuu u tarjumayaa.
Jawaab ugu sii Hector (@ Hector1011010)
Adobe Lightroom ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 2.1 oo leh qaabab nuqul ah, hagaajin isku xirnaanta iyo inbadan